अन्ततः बोले हर्कबहादुरः दोहोऱ्याए पुरानै कुरा – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsअन्ततः बोले हर्कबहादुरः दोहोऱ्याए पुरानै कुरा
कालेबुङः पहाडमा धेरै केही भइसक्दा पनि चुइँ नबोलेका डा. हर्कबहादुर छेत्री आज बोले, तर दोहोऱ्याए पुरानौ कुरा। जनता, मुद्दा, जाति र भाषा सङ्कटमा रहेको बेला मौनता साँध्ने अनि दलीय सङ्कुचनमा बसेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको खोइरोमात्र खनिबस्ने जन आन्दोलन पार्टी अनि डा. हर्कबहादुर छेत्री केही समयदेखि निक्कै आलोचित थिए।
अन्ततः आज उनले आफ्नो मौनता तोडे। ‘पुलिसी शक्ति प्रयोग गरेर ममता सरकारले जे गरिरहेकी छन्, त्यसलाई हामीले अत्याचारकोरूपमा बुझेका छौं, जन आन्दोलन पार्टी पुलिसी दमनको विरोध गर्छ,’ उनले आफ्नै कार्यालयमा बोलाएको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘हाम्रो मोर्चासित मत भिन्नता त छ तर विमल गुरूङ निर्वाचित जीटीएका चीफ एक्ज्युक्टिभ हुन्। उनको घर र कार्यालयमा पुलिसले कुनै अनुमति नलिई जुन आक्रमण गऱ्यो, त्यो निन्दनीय छ।’
हर्कले ममता सरकारको यो दमनले गोर्खाल्याण्ड पन्थीहरूलाई सडकमा ल्याउन सहयोग गरेको पनि बताए। ‘कुनै पनि समस्याको समाधान टेबलमा नै हुन्छ, सडकमा होइन,’ उनले थपे, ममता सरकारले पुलिसी दमनको भरमा समस्याको समाधान गर्छु भन्दैछ, त्यो सही कदम होइन।’
यस्तै दमन हुँदा नै छुट्टै राज्य हुनु कति आवश्यक हो त्यो प्रमाणित भइरहेको पनि उनले बताए।
पुलिसी दमनको विरुद्धमा थाना अघि युवा अनि नारी इकाईले विक्षोप प्रदर्शनी गर्ने पनि उनले जनाए।
गोर्खाल्याण्डको आगामी रणनीति तयार गर्न गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जन आन्दोलन पार्टीलाई सैद्धान्तिक मतभिन्नता रहे पनि बोलाएको थियो। तर जापले मोर्चाले सर्वदलीय वैठकहरूलाई दुरुपयोग गर्छ भन्ने शङ्का गरेर बैठकमा नजाने निर्णय गरेको थियो।
बैठकमा गएर आफ्नो सुझाव राखेर मोर्चालाई फेरि धोका दिन नसक्ने परिस्थिति तयार पार्न अनिवार्य थिएन? भन्ने खबरम्यागजिनको प्रश्नको उत्तरमा डा. छेत्रीले भने, ‘यो इम्म्याटरियल प्रश्न हो, हामीले जे गर्न ठिक मान्यौं त्यो गरिसकेका छौँ।’
मोर्चाले धोका दिन्छ भन्ने शङ्का पनि गर्ने धोका नदिने परिस्थिति तयार पार्न सर्वदलीय बैठकमा पनि नजाने डा. हर्कले आफ्नै पार्टीको व्युरो सदस्यहरूले गोर्खाल्याण्ड ल्याउने रणनीति तयार गरिरहेको पुरानो कुरा आज पनि दोहोऱ्याए। एकवर्षभन्दा धेर जाप चुनावी रणनीतिमा थियो। सबै चुनाउमा हार ब्योहोर्न परेपछि केही दिन अघि जय गोर्खा र जय गोर्खाल्याण्डको नारा लगाएर उप्रान्त केवल गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्छु भनिरहेका डा. छेत्रीलाई ‘त्यो आन्दोलन एक्लै लड्ने?’ भन्ने प्रश्न खबरम्यागजिनले सोधेको थियो।
‘दलहरू आयो भने ढोका खुल्ला रहनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले बनाएको रणनीति कहाँ कहाँ गल्ती छ, के के थप्नुपर्ने त्यो परामर्शसितै आयो भने हामी सबै दललाई स्वागत गर्ने छौँ।’
मोर्चाले बोलाएको बैठकमा चाँहि नजाने जापले एक्लै आन्दोलन लड्ने रणनीति तयार पारिरहेको र जन आन्दोलन पार्टी गोर्खाल्याण्डको लागि चुप नबसेको पनि उनले बताए।
‘यसैको लागि जापले टेक लिएको छ, भाजपा अध्यक्ष अमित शाहालाई एउटा पत्र पठाइरहेका छौँ,’ हर्कले भने, ‘जहाँ 2009 अनि 2014 को चुनाउमा भाजपाले पहाडको मुद्दाप्रति देखाएको सहानुभूतिको सन्दर्भ स्मरण गराइएको छ। हाम्रो माग छ, पहिले भाजपाले राजनैतिकरूपले छुट्टै राज्यको निम्ति प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ।’
डा. हर्कले आज पनि सामुहिक नेतृत्व हुनुपर्ने परिवेश नरहेकोले नै मोर्चाको बैठकमा नगएको अनि 20 जुनको दिन बोलाए पनि नजाने र आफूहरूले पठाएको सुझाव माने बाहिरबाट नै सहयोग गर्ने बताएका छन्।
अहिले पनि सर्वदलीय नेतृत्वको परिवेश छैन? भन्ने प्रश्न गर्दा खबरम्यागजनिलाई डा. हर्कले भने, ‘यो इम्म्याटरियल प्रश्न हो। आन्दोलनको लागि बैठकमा जानैपर्छ भन्ने छैन।’
उनी आफै सडक उत्रिएर आफ्ना कार्यकर्ताहरूसितै ‘म गोर्खाल्याण्डलाई समर्थन गर्छु, मलाई पक्राउ गर’ भन्ने प्लाकार्ड बोकेर थाना अघि पनि उभिए। उनीसित केही कार्यकर्ता अनि पार्ची सचिव र अन्य नेताहरू पनि साथमा थिए।